Iiklip zihlaziywa ngokudibanisa imvelaphi yokwenyani | IPhone iindaba
Iiklip zihlaziywa ngokudibanisa imvelaphi yokwenyani
Ngokukhutshwa kwe-iOS 14.5, abafana baseCupertino bathathe ithuba lokumilisela uhlaziyo olubalulekileyo lwesicelo seVidiyo emfutshane, usetyenziso olufikelela kuhlobo 3.1 kwaye isinika amava amatsha okwenyani ezifumaneka kuphela kwi-iPhone 12 Pro kunye ne-iPad Pro (2020 okanye kamva) ngokudibanisa inzwa ye-LIDAR.
Olu hlaziyo lutsha lwesicelo seMifanekiso luya kusebenzisa iskena seLIDAR tshintsha ubuhle behlabathi okusingqongileyo ukongeza izinto ezahlukeneyo ezinje nge-confetti, ukubengezela, iintliziyo, izibane ze-neon… Enkosi nge-ARKit, isicelo sinokuchonga abantu kwividiyo ukubonisa iziphumo ngaphambili nangasemva kwabo.
Yintoni entsha kuhlobo 3.1 lwesicelo seVideos
Khetha kwiindawo ezisixhenxe ezingathandabuzekiyo, kubandakanya iirebhoni zezibane ezinemibala, i-nebulae yomlingo, iipops zomnyhadala we-confetti, kunye nomgangatho wokudanisa onamandla.
Yongeza umlinganiso omtsha kwiividiyo zakho ngezithuba zokwenyani ezingathandabuzekiyo, enkosi kwisikena seLiDAR kwaye wenze iziphumo ezingummangaliso ezisetyenzisiweyo kwimigca yegumbi.
Dibanisa izithuba zokwenyani ezingathandekiyo kunye neelebhile ze-emoji, izitikha kunye nesicatshulwa ukunika iividiyo zakho ubuntu ngakumbi.
Xa usebenzisa iiVideos kwi-iPad kwaye uyibonisa kwiscreen sesibini, tshintsha phakathi kokubonisa ividiyo kuphela okanye ujongano lonke.
Hlela isicatshulwa kwiipowusta kunye neelebheli nge-iPhone kulungelelwaniso lomhlaba.
Khetha iiprojekthi ezininzi ngaxeshanye ukuzicima ngokukhawuleza okanye ukuziphindaphinda.
Yaziswa xa izitikha, iiposta kunye neziphumo zifumaneka kwiVidiyo.
Inkqubo yeeVideos iyafumaneka kweyakho khuphela mahala. Ukuze ube nakho ukonwabela iziphumo ezingahambelani nenyani engathandabuzekiyo (efumaneka kuphela kwi-iPhone 12 Pro kunye ne-iPad Pro kuluhlu lwe-2020), isixhobo sethu kufuneka sibe yi-iPhone 7 okanye kamva, i-iPad yesizukulwane sesi-6 okanye kamva, okanye i-iPad Ipro ukusuka kwi-2017 okanye kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Iiklip zihlaziywa ngokudibanisa imvelaphi yokwenyani
Yimangalise ngoMhla woMama ngezi zipho